उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन उद्योगी व्यवसायी को माग – Pradesh Network
Posted on June 10, 2020 Author pradeshnetwork	Comment(0)
विराटनगर, २८ जेठ । उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन उद्योगी व्यवसायीले प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग माग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. १ को संयोजनमा हिजो प्रदेश सरकारको आगामी बजेटको सन्दर्भमा भएको प्रदेशस्तरीय अनलाईन संवादमा सो माग गरिएको हो । महासंघ प्रदेश कमिटिका उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले संकटमा रहेका कृषि तथा गैरकृषि उद्योगधन्दालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन बजेटले ध्यान दिनुपर्ने सुझाब दिनुभयो ।
उहाँले यसअघि महासंघले पेश गरेको कृषि क्षेत्र तथा उपक्षेत्रहरुमा लगानीका संभावनाहरुमा ध्यान दिन पनि जोड दिनुभएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्रदेशबीच भएको समझदारी अनुसार प्रदेशमा कृषि उद्यमकेन्द्र स्थापना भईसकेकोले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, सार्वजनिक नीजि साझेदारी तथा सहलगानीका कार्यक्रममा प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको सहभागिता गराउनुपर्ने, कोरोना महामारीबाट अतिप्रभावित पर्यटनको क्षेत्रको पुनर्उद्धार, पुनस्र्थापना र विस्तार गर्न सार्वजनिक नीजि साझेदारी मार्फत कार्यक्रमहरु अघि बढाउनुपर्ने सुझाब राउतले दिनुभयो ।
महासंघले चिया, अलैंची, अदुवा, सुपाडी जस्ता वस्तुहरुको प्रवद्र्धन गरी निर्यात बढाउन सूचना केन्द्रको स्थापर्ना, प्रशोधन केन्द्र र आधुनिक भण्डारणको स्थापना गर्न पनि जोड दिएको छ । संकट प्रभावित क्षेत्रमा मालपोत, स्थानीय कर शुल्क आदिमा छुट दिन र निर्यातजन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई आकर्षण गर्ने सुविधा दिन पनि महासंघले माग गरेको छ ।
छलफलमा सहभागी मन्त्री आङ्ग्बोले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाब यथासक्य बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने जनाउनुभयो ।
अनलाईन संवादमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान र चन्द्रप्रसाद ढकाल, केन्द्रिय सदस्य अविनास बोहरा, प्रदेश महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्का, प्रदेश नं. १ का विभिन्न उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरु, वस्तुगत संघका अध्यक्षहरु, उद्योगपति पवनकुमार गोल्यान, महेश जाजुलगायतको सहभागिता थियो ।
विराट मानव सेवा समाज नेपालको आफ्नै भवन निर्माण हुने
Posted on June 10, 2020 Author pradeshnetwork
विराटनगर, २८ जेठ । विराटनगर–५ स्थित विराट मानव सेवा समाज नेपालको आफ्नै भवन निर्माण हुने भएको छ । निर्माण हुने ८ कोठे भवनको नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले आज शिलान्यास गर्नुभएकोे छ । कोइरालाले निर्माण सामग्रीमा विधिपूर्वक पूजा गरी शिलान्यास गर्नुभएको हो । भवन निर्माणका लागि विराटनगर महनगरपालिकाबाट १० लाख, नेपाली कांग्रेस प्रदेश–१ […]
Posted on June 22, 2020 Author pradeshnetwork
विराटनगर,८असार । प्रदेश १ का जनप्रतिनिधिले कोरोना भाईरसका कारण बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव विरुद्ध एकजुट हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कोरोना भाईरसका कारण बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्ने देखिएकाले एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने आवस्यकता औल्याईको छ । वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले आईतबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री र […]
जथाभावि प्रदर्शन गर्नेलाई कार्वाहि गर्न माग
विराटनगर, २० असार । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समितिको बैठक बसिरहेको बेला प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा स्वतन्त्रको नाममा प्रदर्शन गर्नेलाई कारबाहीको माग गरिएको छ । पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा माग भएपछि ओलीपक्षका कतिपय कार्यकर्ताले अन्य शीर्ष नेताहरु भारतीय दलाल भएको भन्दै विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका थिए । सो […]
बालिकालाई बलात्कार गर्ने गडेरी थुनामा